dgn - Geofumadas
Tontolo iainana miharo - Ny vahaolana takian'i Geo-Engineering
Nahazo fotoana be voninahitra izahay tamin'ny fotoana iray izay fifehezana ny fifehezana, ny fizotrany, ny mpilalao sarimihetsika, ny fironana ary ny fitaovana samihafa ho an'ny mpampiasa farany. Ny fepetra takiana amin'ny sehatry ny Geo-engineering ankehitriny dia ny fananana vahaolana izay ahafahana manamboatra ny zavatra farany fa tsy ireo faritra ihany; toy ny ...
Bentley Systems DGN I-modely
Engineering, fanavaozana, Microstation-Bentley, topografia
Tsy dia mivarotra lozisialy izahay fa mivarotra ny valin'ny rindrambaiko. Tsy mandoa vola aminay ho an'ny rindrambaiko ny olona, ​​mandoa anay izy ireo amin'ny zavatra ampiasain'ny fitomboan'i Bentley tamin'ny alàlan'ny fahazoana. Ny roa tamin'ity taona ity dia anglisy. Synchro; fandrindrana rindrambaiko, ary Legion; ny fandaharana momba ny sarintany amin'ny vahoaka ...
Bentley Systems BIM DGN I-modely
BIM Advances - Famintinana ny fihaonambe isan-taona
Ny fandrosoana amin'ny fampanarahana fenitra ny Model Information Information (BIM) no lohahevitra niampitana tamin'ny Fihaonambe Fotodrafitrasa isan-taona, natao tamin'ny volana oktobra tany Singapore. Na dia nogiazana ara-dalàna aza ny kaontiko Twitter niaraka tamin'ny diezy # YII2017 tamin'izany andro izany, ity misy famintinana. Ny dia amin'ity indray mitoraka ity ...
BIM DGN I-modely
Webinar: 5 zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny CAD rindrambaiko
Alao an-tsaina hoe manana andiany 45 ianao, miaraka amina boaty na modules ao amin'ny Layout izay mitondra fampahalalana mifandraika amin'ny latabatra ao amin'ny Microsoft Office, toy ny laharana taratasy, izay nankatoavina, daty nankatoavana, sns. Ary mila mampihatra fanovana amin'ireo fiaramanidina rehetra ireo ianao fa tsy mila manokatra tsirairay, manova ny angona ao amin'ny ...
2 tetika amin'ny Microstation: Fanamboarana simba antontan-taratasy sy ny olana DWG 3D
Olana 1. Ny fisie DGW 3D dia misokatra toy ny hoe tsy refy 2 ihany no mahazatra dia mahazatra tokoa fa rehefa manokatra fisie 3D amin'ny endrika DWG, miaraka amin'ny Microstation, dia misokatra toy ny hoe misy refy 2 fotsiny. Izany dia mitranga satria ny Microstation matetika dia namboarina tamin'ny safidiny, ilay rakitra voa (masomboly), mitovy amin'ny ...
Ampitahao fiovana izay nitranga toy ny CAD rakitra
Ny filàna matetika dia ny fahafantarana ny fanovana nitranga tamin'ny sari-tany na drafitra, raha oharina amin'ny teo alohan'ny nanovana azy na koa ny fiasan'ny fotoana, amin'ny rakitra CAD toy ny DXF, DGN ary DWG. Ny fisie DGN dia endrika fananana sy zana-tany an'i Microstation. Mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny ...
Bentley Systems cadastre DGN
Torotoroy ny teny miafina ny VBA macro Microstation
Visual Basic for Applications dia andiana tranomboky izay natolotr'i Microsoft misy, somary ntaolo nefa tena matanjaka, indrindra amin'ny kinovan'ny Office talohan'ny 2010. Na dia mitohy misy aza izy io, dia misy fivoarana maro ankehitriny vita amin'ny .NET sy ny tontolo iainana hafa; na izany aza, ho an'ny fivoarana miorina amin'ny rafitra, VBA dia ...
Microstation CONNECT Edition - Tsy maintsy mifanaraka amin'ny interface vaovao isika
Ao amin'ny fanontana CONNECT an'ny Microstation, natomboka tamin'ny 2015 ary nifarana tamin'ny 2016, ny Microstation dia manova ny fampifanarahana menio mahazatra azy amin'ny alàlan'ny bira fisakafoana ambony toa an'ny Microsoft Office. Fantatray fa ity fiovana ity dia mitondra ny vokany avy amin'ilay mpampiasa izay nahalala hoe aiza no ahitana ny bokotra, toy ny nanjo an'ireo mpampiasa ...
Microstation-Bentley, Pirinty voalohany
Fifindra-monina sehatra Geospatial 10 taona taty aoriana - Jeografia Microstation - Oracle Spatial
Fanamby iraisana io ho an'ny tetik'asa Cadastral na Cartography marobe, izay tao anatin'ny vanim-potoana 2000-2010 nampidirina Microstation Geographics ho motera angon-drakitra, mandinika ny antony toy ireto manaraka ireto: . Ny DGN dia fomba hafa manintona, raha jerena ny endriny amin'ny rakitra mitovy, ...
Bentley Systems cadastre DGN GeoServer QGIS
cadastre, Featured, jeospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
BIM - ny fironana tsy azo ovaina amin'ny CAD
Ao amin'ny tontolontsika Geo-Engineering, ny teny BIM (Building Information Modelling) dia tsy tantara intsony, izay mamela ireo zavatra tena izy hanan-tarehy modely, tsy amin'ny sary misy azy ihany fa amin'ny dingana hafa eo amin'ny fiainany. . Midika izany fa ny arabe, tetezana, valizy, lakandrano, tranobe, ...
Autodesk Bentley Systems DGN dwg I-modely
AutoCAD-Autodesk, Featured, jeospatial - GIS, Microstation-Bentley, My egeomates
Hanova angon-drakitra an-tserasera!
MyGeodata dia serivisy an-tserasera mahavariana ahafahana manova ny angona geospatial, miaraka amina endrika CAD, GIS ary Raster hafa, ho rafitra iray hafa sy rafitra fanovozan-kevitra. Mba hanaovana izany dia mila mampakatra ilay rakitra fotsiny ianao, na manondro url iray izay itahirizana azy. Afaka ampakarina tsirairay ny rakitra, na ...
jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Maka sary Manager: Manage maka sary angona mahomby, dia avy AutoCAD
Spatial Manager dia fampiharana ho an'ny fitantanana angovo mirazotra, izay miasa mahaleo tena. Misy koa plugin izay manome fahaizana geospatial amin'ny AutoCAD.
AutoCAD 2015 AutoCAD Map DGN dwg KML Ny fahatsapana voalohany QGIS shp
AutoCAD-Autodesk, jeospatial - GIS
Manorata polygon amin'ny Microstation avy amin'ny Excel
Amin'ny fampiasana an'ity modely ity dia afaka manintona polygonal amin'ny Microstation ianao, avy amin'ny lisitry ny bearings sy ny halavirana ao Excel, na ny lisitry ny x, y, z co. Tranga 1: Lisitry ny torolàlana sy ny elanelan-tany Eritrereto hoe manana an'ity tabilao data eto an-tsaha ity isika: Ao amin'ny tsanganana voalohany dia misy ny gara, ...
Bentley Systems tapakila DGN
Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Fanokafana, fametahaka marika sy theming .shp rakitra iray amin'ny Microstation V8i
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fanokafana, fanaovan-gazety ary fanoratana anarana rakitra shp amin'ny fampiasana Microstation V8i, izay mitovy amin'ny Bentley Map. Na dia rakitra 16-bit izy ireo, antitra toy ny sasany- amin'ny volondavenona ahy, tsy azo ihodivirana ny fampiasan'izy ireo hatrany amin'ny tontolontsika ara-jeôgrafika. Mazava ho azy, ireo mason-tsivana ireo dia azo ampiharina amin'ny zavatra vector mifandray ...
Bentley Systems cadastre DGN shp
Manondro rahona sy fampifanarahana amin'ny Google Maps - 5 Inona no vaovao ao amin'ny Microstation V8i
Ny fahafahan'ny fifandraisana amin'ny Google Maps sy Google Earth ary ny fikirakirana ny angona avy amin'ny scanner dia ny sasany amin'ireo andrasana maika amin'ny rafitra GIS - CAD. Amin'ireto lafiny ireto, tsy misy olona misalasala fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia nandroso haingana kokoa noho ny rindrambaiko manana. Amin'izao fotoana izao aho dia mandinika ny fanavaozana faharoa an'ny ...
Microstation synchronize amin'ny Google Earth
Google Earth dia nanjary fitaovana saika tsy azo ihodivirana amin'ny fizotran-tsoratray ankehitriny. Na dia misy fetrany sy valiny mora aza izany, maro ny fanodikodinam-po no resahina isan'andro, manana an'io fitaovana io izahay fa ny geolocation sy ny fivezivezena amin'ny sarintany no malaza kokoa ... noho izany manana ...
cadastre, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
8.5 famahana olana amin'ny Windows 7
Ireo izay maniry hampiasa Microstation 8.5 amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mampiasa Windows XP amin'ny milina virtoaly noho ny tsy fitoviana amin'ny Windows 7, izay ratsy kokoa amin'ny 64 bit. Notanisain'izy ireo ny olan'ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra, izay efa noresahiko teo aloha ny fomba hamahana izany ary koa miresaka momba ny manager sary sy ny fifandraisana ODBC izy ireo. Andao hojerentsika ny fomba hamahana azy ireo ...
Mpamadika an-tserasera maimaimpoana ho an'ny angona GIS - CAD sy Raster
MyGeodata Converter dia serivisy amin'ny Internet izay manamora ny fanovana ny angona misy endrika samihafa. Amin'izao fotoana izao, ny serivisy dia manaiky endrika fampidirana vector 22: ESRI Shapefile Arc / Info Binary Coverage Arc / Info .E00 (ASCII) Coverage Microstation DGN (Version 7) MapInfo File Comma Separated Value (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS Fanisam-bahoaka amerikana ...
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 6 Next pejy